Vaovao momba ny dia any Eropa • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia
Firenena eropeana voalohany tany Italia no nihoatra ny 100,000 maty COVID
Italia dia nihoatra ny 100,000 ny maty
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Firenena eropeana voalohany tany Italia no nihoatra ny 100,000 maty COVID
Nisy fampitandremana avy amin'ny efitrano fanaraha-maso COVID-19 any Italia satria nihoatra ny 100,000 XNUMX ny isan'ireo maty.
Ny fanamafisana - "haavon'ny fifehezana ambony indrindra" - dia ny fifehezana amin'ny sehatra nasionaly satria ny fidirana an-tsehatra amin'ireo faritany dia "tsy dia ampiasaina firy."
Ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana vaksiny dia tokony hafainganina alohan'ny andro vitsivitsy.
Mihazakazaka ny viriosy, ny variants dia mampiakatra ny fihodinan'ny areti-mifindra, ary misy ny fitomboan'ny haben'ny fandriana ao amin'ny tobim-pitsaboana mafy.
Any Italia, ny fahafatesan'ny COVID-19 dia nihoatra ny 100,000. Io no firenena eropeana voalohany nahatratra an'io isa io. Ahina mafy ny hidiran'i Italia amin'ny faritra mena sy ny fanidiana hafa vokatr'izany.
Ny fihanaky ny variants dia mitarika amin'ny làlana vaovao. Efa an-dalana ny lalàna vaovao momba ny loko sy ny quarantine, hoy ny tatitry ny Huffpost Italia.
Ny fanamafisana - "haavon'ny fifehezana ambony indrindra" - dia ny fifehezana amin'ny sehatra nasionaly satria ny fidirana an-tsehatra amin'ireo faritany dia "tsy dia ampiasaina firy." Ity fampitandremana ity dia avy amin'ny COVID-19 fanaraha-maso efitrano satria ny isan'ny maty dia nihoatra ny marika 100,000 XNUMX mahery.
Ny governemanta sy ny mpahay siansa dia miasa mba hahatonga ny mason-tsivana hanombanana ny fivoaran'ny valanaretina ary ho fanovana ihany koa ny famantarana ny faharetan'ny vanim-potoana sy ny vanim-potoana fitokana-monina ho an'ny viriosy, manomboka amin'ny fikajiana ny Rt.
Nampandrenesina ny fanavaozana ny antontan-taratasy “ny fanomanana sy ny drafitra amin'ny dingana tetezamita amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina.” Ity "boky torolàlana manga" ity dia navoaka tamin'ny tapaky ny volana Oktobra tamin'ny taon-dasa, izay nanolotra ny famolavolana ny fepetra fitehirizana sy fanalefahana ary nampiditra ireo tranga 4 mifandraika amin'ny loza mety hitranga amin'ny fifindra-monina any amin'ireo faritany isan-karazany.
Ny fanavaozana, izay iarahan'ny Istituto Superiore di Sanità, Inail ary Aifa miaraka amin'ny minisiteran'ny fahasalamana, dia hampifandraisina amin'ny boriborintany manaraka avy amin'ny minisitera tarihin'i Roberto Speranza.
Ny tanjona dia ny hijanonana araka izay tratra ary amin'ny fotoana fohy aelin'ny fihanaky ny variants, izay miha mitohy hatrany, ary mbola mitohy ihany koa ny fampielezana vaksiny, izay tokony hanafaingana ny andro vitsivitsy manaraka.
Toerana akaikin'ny efitrano fanaraha-maso: “Tsy dia ilaina loatra izao ny fepetra eo an-toerana”
Ny fampidirana an-tsehatra amin'ny fepetra vaovao taorian'ny fampiharana ny sabotsy 6 martsa 2021, ny Dpcm farany (didim-panjakana) - ny voalohany izay nosoniavin'i Mario Draghi - dia avy amin'ny efitrano fifehezana - ny vondron'asa ny solontenan'ny Institute Superior of Health and of the Ministry of Health and by technicians of the faritra.
“Miaraka amin'ny onja fahatelo eo am-panatanterahana sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana vaksiny miady mafy noho ny tsy fahampian'ny vaksinina misy, tsy misy dikany firy ny fepetra eo an-toerana ”, hoy i Enrico Coscioni, mpandidy fo voalohany; filohan'ny Agenas, ny masoivohom-pirenena misahana ny asa ara-pahasalamana; ary mpikambana iray ao amin'ny efitrano fanaraha-maso, "izay notondroin'i Coscioni - dia nankinina tamina asa iray manokana" ary iza no nazava tsara tamin'ny fanomezana famantarana momba ny lalana tokony harahina. Tao amin'ny tatitra farany ny zoma 5 martsa 2021, "hoy izahay mazava," hoy hatrany ny filohan'ny Agenas, "fa ity toe-javatra ity dia mitaky fananganana ambaratonga avo indrindra any amin'ny faritra rehetra."
Mihazakazaka ny viriosy, ny variants dia mampiakatra ny fihodinan'ny areti-mifindra, ary misy ny fitomboan'ny haben'ny fandriana ao amin'ny tobim-pitsaboana mafy. Noho izany, "tao anatin'ny vanim-potoanan'ny valanaretina toy ny amin'izao fotoana izao," hoy i Coscioni namarana, "tsy dia ampiasaina firy ny fanaovana fepetra amin'ny faritra."
Ny latabatra fampitahana
Amin'ny fototra inona no handraisana ireo fepetra vaovao? Tanjona ambonin'izany rehetra izany amin'ny fampijanonana ireo variants? Efa natomboka ny fiadian-kevitra eo amin'ny governemanta, ny teknisianina, ny mpahay siansa ary ny faritra. Ny Dpcm vaovao dia mametraka latabatra fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana voaforon'ny solontenan'ny Institiota ambony momba ny fahasalamana, ny faritra ary ny faritany mizaka tena, ny minisitry ny raharaham-paritra ary ny komity siantifika teknika, miaraka amin'ny lahasa hirosoana amin'ny fanitsiana mety na ny fanavaozana ireo masontsivana ho an'ny fanombanana ny risika amin'ny valanaretina.
Ny fihaonambem-paritra dia hanondro amin'ny fomba ofisialy ireo solontenany izay hofidiana ny ampitson'iny tamin'ny fivorian'ny filankevi-paritry ny fahasalamana amin'ny alakamisy 11 martsa 2021. Saingy efa misy soritr'asa sy petra-kevitra maromaro eo amin'ny latabatra sy eo amin'ny ivon'ny fanombanana ny teknisiana sy ny mpahay siansa.
Fepetra vaovao: "ny lanja" amin'ny fikarakarana mafy sy ny RT isaina amin'ny marary
Eo an-tampon'ny lisitr'ireo fepetra vaovao izay mahatonga ny efitrano fanaraha-maso mieritreritra ny hanara-penitra ny lalàna manoloana ny fananganana fepetra henjana kokoa, dia misy tokoa ny masontsivana (ny isan'ny lafy tsara isaky ny mponina 100,000 7) mitombo ho 250 andro misy tranga 100,000 isaky ny olona XNUMX XNUMX.
Napetraka tao amin'ny Dpcm farany handidiana ny fanakatonana sekoly, azo ampidirina ihany koa ny fetra mba hiteraka ny faritra mena ho azy, afa-tsy ny filoham-paritra - "ary na ny minisitra sasany aza" dia manazava loharanom-pahefana tena mahay - manohitra izany satria ny automatisme dia mety hiala amin'ny swabs.
Ny fisainana dia mifantoka amin'ny fahafaha-manatsotra ireo tondro 21 ampiasaina hamantarana ireo tarika mety hametrahana ireo faritra, mifantoka amin'ireo heverina ho manan-danja indrindra hanarahana ny fivoaran'ny valanaretina. Ohatra iray ny isan'ireo fandriana alain'ireo marary COVID amin'ny fikarakarana be.
Ankoatr'izay, manombatombana mba hikajiana ny index index, ny Rt fantatra ankehitriny, amin'ireo marary hopitaly ohatra. Ary manombatombana mba hikajiana ny index transmissibility, ilay Rt fantatra ankehitriny, amin'ireo marary hopitaly, mba hananana tombana mazava kokoa amin'ny fihanaky ny aretina ateraky ny virus.
Ny henjana kokoa ihany koa ho an'ny fitokanana sy ny quarantine
Ny fanamafisana ny fanoherana ny variant dia misy koa ny fanovana ny famantarana ny faharetana sy ny fe-potoana fitokana-monina ny voka-dratsy amin'ny viriosy ary angamba ny fitsipika izay tsy maintsy harahin'ireo antsoina hoe fifandraisana akaiky.
Ny boriborintany vaovao an'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia hampiditra fanovana mikasika izay natsangana tamin'ny 12 Oktobra tamin'ny taon-dasa, ho an'ny tranga tsara maharitra, ohatra. Androany, "ny olona izay, na dia tsy maneho soritr'aretina intsony aza, dia manohy manandrana miabo amin'ny fitsapana molekiola. Raha tsy nanana soritr'aretina nandritra ny 7 andro farafaharatsiny izy ireo dia ho afaka hampiato ny fitokana-monina aorian'ny 21 andro. Ity dia famantarana iray izay mety tsy ampy manoloana ny aretina ateraky ny virus miovaova, izay areti-mifindra kokoa noho ilay antsoina hoe "aretina tany am-boalohany." Noho io antony io ihany dia mety hiova ny lalàna mifehy ny fifandraisana akaiky asymptomatika.